साठीमा भिभ रिचडर्स – Sourya Online
साठीमा भिभ रिचडर्स
सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन २५ गते ४:३६ मा प्रकाशित
एन्टिगुआ, २४ फागुन । साठी । ६० वर्ष, ६० वटा मैनबत्ती बालिन्छन् । यसै दिन जीवनमा खाएका र ˆयांकिएका चुइंगमको समेत याद हुन सक्छ । ब्याट्सम्यानको यो सफलतापछि विपक्षीहरू स्तब्ध हुन्छन् । ब्याटिङ पक्ष, त्यत्तिकै निश्चिन्त ।
हो, यो त्यो योग हो जसलाई देखेर विपक्षीहरू स्तब्ध हुन्छन् र वस्तुस्थितिबारे पटकपटक सोच्न बाध्य हुन्छन् । अझ भन्ने हो भने उनीहरू यो अङ्क देखेर अक्सर आतङ्कित हुन पुग्छन् । आखिर उनीहरू यस्तो नहुन् पनि किन ?
बङ्गलोरको सुरुआती त्यो दिन उत्कृष्ट बलरको बललाई चिल्ली र चुइंगमझैं प्रयोग गर्दै रन बटुलेको पनि याद हुन सक्छ । त्यो इनिङ उनको मात्र होइन, मेरो पनि डेब्यु थियो । मतलब, मैले यसभन्दा अघि कहिले पनि क्रिकेट हेरेको थिइन । घांस भएको ब्याटिङका लागि कठिन त्यो पिच । अनि सेतो अक्षरले लेखिएको जादुमय स्कोर । पहिलो खेल नै यत्ति महत्वपूर्ण खेल हेर्न पाउने म अत्यन्त भाग्यमानी क्रिकेट सपोर्टर हुा । म त्यो भाग्यमानी दर्शक हुा जसले म्याकोले ˆयााकेको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय बल पनि हेरेको थिएा ।
म त्यसपछि नै क्रिकेटमा हुर्किएा । सांचो भनु भने म तिमीसाग नै क्रिकेटमा उदाएा । ‘मलाई क्रिकेट मृत लाग्थ्यो । मसागै जाग्यो । तिमी र म सागै क्रिकेटमा रहृयांै तर ममा तिमीजस्तो हरेक बललाई चुइंगमझैं उपयोग गर्ने क्षमता नै थिएन । तिम्रो बलिष्ठ पाखुरा र त्यसबाट निस्केको शक्तिको त कुरै न गरौं । त्यतिखेर डेनी -डेनिस लीली) को बललाई प्रहार गर्ने क्षमता नै कहाा हुन्थ्यो र ? थोमो -थोम्सन) र लेनी पनि तिम्राअघि टिक्न सकेनन् ।
लेनी -डेनिस लीली) ले एकपटक बाउन्सर ˆयााक्दा बल तिम्रो नाकको छेउैबाट गयो । निधारमा पनि झन्डै लागेको । त्यसको लगत्तै उसको रनअप हेरेर नै निर्णय गर्‍यो । सिधा छक्का प्रहार गरिहाल्यौ । ‘उसले भन्यो, ‘हामीले उसलाई शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपले ध्वस्त पार्न चाहृयैां ।’ तिम्रो जवाफ पनि कम थिएन । तिमीले भन्यौ, ‘मेरो ब्याट नै मेरो तरबार हो ।’
एन्टिगुवा र ओल्ड ट्रयाफोर्डको एक/एक इनिङ मैले गुमाएा । मैले समाचार पढें । जसले त्यो इनिङ हेरे उनीहरूलाई मैले भाग्यमानी सम्भिmएा । मैले भिभको ब्याटिङ कलेक्सन हेरें । विल्स र बेफीले लेग स्टम्पभन्दा तीन फिट बाहिर निस्केर कभरमा ड्राइभ गरेको सााच्चै उत्कृष्ट थियो । इमानदारीपूर्वक भन्दा मैले जीवनमा एकपटक तिम्रो असफलता चाहे । तिमीले मदनलाललाई हात हालेकाले भारतीय सञ्चारले त्यो खेल बहिस्कारको निर्णय गरेको थियो । क्रिकेट सुन्ने मेरा कान त्यो रात सङ्गीत सुन्नमा नै व्यस्त रहेका थिए । अहिले म तिम्रै कारणले जेरेफी आर्करको ˆयान भएको छु जसले मलाई तिम्रोबारे बुझ्न धेरै सहयोग गर्‍यो । तिम्रो प्रधानमन्त्री लेस्टबरडले भनेको म अहिले पनि सम्भिफरहंछु । ‘रिचर्डले क्यारेबीयनको एउटा कोशेढुङ्गाको प्रतिनिधित्व गरे । युवा, डाइनामिक र प्रतिभाशाली एउटा युवाले हामीलाई विश्वको माझमा चिनायो तर विश्वले उसलाई चिनेन ।
अहिले समरसेटको प्रशिक्षक भएका तिमीलाई म त्यो र अहिलेको समयमा उस्तै देखिरहेंछु । तिम्रो टोली र तिम्रो टोलीका हरेक खेललाई अधैर्य भएर हेरिरहेको छु । भिन्न लेखकहरूले लेखेको पढेर नै थाहा पाएा, तिमी रकम स्टार पनि रहेछौ । मैले तिनीहरूबाटै थाहा पाएा कि तिमि त सन् १९७६ मा बब मार्लीको डेपुटी पनि रहेछौ । अहिले पनि भन्छु, ‘तिमीले बङ्गलोरमा प्रहार गरेको त्यो ६० रनलाई तिमीले महत्व दिएनौ । तिमी ब्याटिङ सम्राटको रूपमा अघि बढिरहृयौ । यसैगरी, अघि बढ । -वेस्ट इन्डिजका महान क्रिकेटर भिभियन रिर्चड्स ६० वर्ष पूरा गरेपछि जीवनभर उसको खेल हेरेका क्रिकेट समीक्षक श्रीराम दयानन्दले रिचडर्सकै बारे लेखेको आलेख । मार्च ७ भिभको जन्मदिन हो । वेस्टइन्डिजले प्रथम दुईपटक विश्वकप जित्दा र तेस्रोपटक उपविजेता हाुदा उनी टोलीका महत्वपूर्ण खेलाडी थिए ।)